KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Moore Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
12 Na wohuu sɛnkyerɛnne+ kɛse bi wɔ soro, ɔbea+ bi a ofura owia na ɔsram wɔ ne nan ase na nsoromma dumien abotiri bɔ ne ti; 2 ná ɔyem, na ɔteɛm wɔ n’awoko yaw+ ne n’awo mu amanehunu mu. 3 Na wohuu sɛnkyerɛnne foforo wɔ soro, na hwɛ! ɔtweaseɛ+ kɛse kɔkɔɔ bi a ɔwɔ ti ason ne mmɛn du na ahemmotiri ason bobɔ ne ti ni; 4 na ne dua+ twee ɔsoro nsoromma+ nkyem abiɛsa mu biako tow guu asase so.+ Na ɔtweaseɛ no begyinaa ɔbea+ a awo aka no+ no anim, na sɛ ɔwo a, wamene+ ne ba no. 5 Na ɔwoo ɔbabarima+ a ɔde dade poma+ bɛyɛn aman nyinaa. Na wohwim ne ba no kɔɔ Onyankopɔn nkyɛn wɔ n’ahengua ho.+ 6 Na ɔbea no guan kɔɔ sare so,+ faako a Onyankopɔn asiesie baabi ama no sɛ wɔmma no aduan+ nna apem ahanu aduosia.+ 7 Na ɔko baa soro: Mikael+ ne n’abɔfo ne ɔtweaseɛ no koe, na ɔtweaseɛ no ne n’abɔfo ne wɔn koe 8 nanso wɔantumi, na wɔannya tenabea ɔsoro bio. 9 Enti wɔtow ɔtweaseɛ+ kɛse no kyenee, ɔwɔ+ dedaw no, nea wɔfrɛ no Ɔbonsam+ ne Satan+ a ɔredaadaa asase sofo nyinaa no;+ wɔtow no kyenee asase so,+ na wɔtow n’abɔfo kaa ne ho gui. 10 Na metee nne kɛse bi wɔ soro sɛ: “Afei na yɛn Nyankopɔn nkwagye+ ne n’ahoɔden+ ne n’ahenni+ ne ne Kristo no tumi+ aba, efisɛ wɔatow nea ɔtoto yɛn nuanom ano no akyene, nea ɔtoto wɔn ano awia ne anadwo wɔ yɛn Nyankopɔn anim no!+ 11 Na wodii no so nkonim+ esiane Oguammaa+ no mogya ne wɔn adansedi+ asɛm no nti, na ɛba sɛ wobewu mpo a, na wɔnnɔ wɔn kra.+ 12 Eyi nti mo ɔsoro ne mo a motete mu,+ momma mo ani nnye! Asase ne ɛpo+ nnue,+ efisɛ Ɔbonsam asian aba mo nkyɛn na ne bo afuw denneennen, efisɛ onim sɛ ne bere a aka yɛ tiaa.”+ 13 Afei bere a ɔtweaseɛ no hui sɛ wɔatow no akyene asase so no,+ ɔtaa ɔbea+ a ɔwoo ɔbabarima no. 14 Na wɔde ɔkɔre+ kɛse no ntaban abien no maa ɔbea no sɛ ɔmfa ntu nkɔ ne tenabea wɔ sare+ so; ɛhɔ na wɔmaa no aduan+ bere ne mmere ne bere fã+ fii ɔwɔ no anim.+ 15 Na ɔwɔ no puw nsu+ te sɛ asubɔnten fii n’anom dii ɔbea no akyi sɛ asubɔnten no mfa no.+ 16 Nanso asase bɛboaa ɔbea no,+ na asase buee n’anom menee asubɔnten a ɔwɔ no puw fii n’anom no. 17 Na ɔtweaseɛ no bo fuw ɔbea no,+ na ɔne ɔbea no asefo a aka a wodi Onyankopɔn ahyɛde so na wokura Yesu ho adansedi+ adwuma mu no kɔkoe.